Literature | komalprd Literature – komalprd
February 7, 2015 komalprdकविता Leaveacomment
हे हे सांसद हो गरीव जनता झुक्याइ ढाँट्छौ किन ?
मागी भोट जितेपछि प्रभु बनी सर्लक्क छाड्छौ किन ?
ज्यादै धूर्त चरो तिमी नकचरो यो देश भाँड्छौ किन,
भ्रष्टाचार अचार भुल्न नसकी त्यो र्याल काढ्छौ किन ?
मन्त्री जङ्गलको बनेपछि स्वयं आरक्ष फाँड्छौ किन ?
कुम्ल्याई बनको अकूत धन यी निर्दोष डाँड्छौ किन ?
आफैं रक्षक हौ भने स्वजनको नै शीर काट्छौ किन ?
बाचाबन्धन अस्तिको सब भूली त्यो थूक चाट्छौ किन ?
भन्छौ शान्ति म दिन्छु मात्र मुखले क्षेप्यास्त्र हान्छौ किन ?
खोटो द्रव्य मुठ्याउदै बस परी यो देश खान्छौ किन ?
मद्योन्मत्त र स्वार्थका बस परी अस्तित्व गाड्छौ किन ?
यो नेपाल बपौति हैन टुकुरा पारेर बाँड्छौ किन ?
नेपाली पहिचान अर्थ नबुझी यो झेल खेल्छौ किन ?
त्यागी वस्त्र घरेलु झट्ट परदेशी वस्त्र फेर्छौ किन ?
हाम्रो देश सखाप पार्न सबले इच्छा गर्या हो ? भन
साच्चै नै यदि हो भने अब छिटै जल्नेछ है जीवन ।।
January 28, 2015 komalprdसमालाेचना Leaveacomment
कृष्णबहादुर पराजुली र नर्मदा पराजुलीका पुत्ररत्नका रूपमा झपाको शिवगन्ज ८ मा जन्मिएका हिरा पराजुली (२०१० … ) को स्थायी वसोवास भानु नगर भद्रपुरमा रहेको पाइन्छ । उनको साहित्यिक नाम चाहिं हिरा आकाश हो । यिनी आङ्ख Continue reading →
विश्वका सामु नेपाली सर्वाङ्ग नाङ्गियौं सब
January 27, 2015 komalprdकविता Leaveacomment
हाम्रा सांसद नेपाली नामका मात्र छन् तर,
यता हैन उतै उन्का आफ्नै छन् जन्मका घर ।
यताका पनि छन् केही तर ती मद्यका भर,
परेर ध्वस्त पार्दैछन् डढाई पितृको घर ।
बनाउँछौं भनी देश जनता मात्र ठग्दछन्,
सौताका रिसले आफ्नै पोइको काख हग्दछन् ।
उनी वानर हुन् भन्ने नबुझेर दियौं मत,
आफ्नै कुर्सीहरू भाँची फ्याँक्ता पो चिनिए स्वतः ।
संविधान बने भाँडभैलो गर्न नपाइने,
अराजक भई कुर्सी पनि भाँच्न नपाइने ।
सभासद भई भत्ता कुल्याउन नपाइने,
देश टुक्याउने झेल खेल खेल्न नपाइने,
हुनाले जे गरे ठीक भन्नु मात्र रह्यो अब,
विश्वका सामु नेपाली सर्वाङ्ग नाङ्गियौं सब ।